पुरुष यौनकर्मीको दर्दनाक कथा ! श्रीमतीसँग सेक्स गरेको श्रीमानले सोफामा बसेर हेर्यो::Nepal's Online News Portal
पुरुष यौनकर्मीको दर्दनाक कथा ! श्रीमतीसँग सेक्स गरेको श्रीमानले सोफामा बसेर हेर्यो
बिहि, अशोज ११, २०७५
असोज ११ /‘तिमीलाई थाहा छ, तिमी कहाँ उभिएको छौ । यहाँ शरिरको मोल मोलाई हुन्छ ।’
म अर्थात एक पुरुष, निलो, गुलाबी बल्ब राखिएको यो कोठामा आफूलाई बेच्नका लागि उभिएको थिएँ ।
म अघिल्तिर अधबैंसे महिला, होइन उनी तेस्रोलिङ्गी थिइन । उनलाई सुरुमा देख्दा त डराएको थिएँ । उनले मलाई भनिन, ‘तँसँग धेरै एटिट्युड छ । तर यहाँ चल्दैन ।’
‘जा गएर अफिसमा नै काम गर । यहाँ के गरिरहेको छस ?’ यस्तो जवाफ पाएपछि म चुप बसें । केही मिनेटमा नै म यो बजारका लागि एउटा नयाँ माल भएँ ।
ती तेस्रोलिङ्गी मसँग अचानक नरम भएर बोलिन, ‘तेरो फोटो पठाउनुपर्छ । नपठाए कसैले कुरा गर्दैन ।’
उनी सायद ३२–३४ वर्षकी विवाहित महिला थिइन । कुराकानी सुरु भयो र उनले भनिन, ‘म त गलत ठाउँमा फँसे । मेरा श्रीमान समलिङ्गी हुन र अमेरिकामा बस्छन । म सम्बन्धविच्छेद पनि गर्न सक्दिनँ । एक सम्बन्धविच्छेद भएकी महिलासँग कसले विवाह गर्छ ? मेरो पनि विभिन्न कुरामा रुची हुन्छ, भन म के गरुँ ।’
हामी दुबैले रक्सी पियौं । उनले हिन्दी गीत बजाइन र नाच्न सुरु गरिन । हामी दुबै डाइनिङ रुमबाट बेडरुममा गयौं ।
अहिलेसम्म उनले मलाई निकै प्रेमपूर्वक कुरा गरिरहेकी थिइन । काम सिद्धिने बित्तिकै पैसा दिएर भनिन, ‘ल अब यहाँबाट गइहाल् ।’
उनले मलाई टिप्स पनि दिइन । मैले उनलाई भनें, ‘मैले यो सबै पैसाको बाध्यताका कारण गरिरहेको छु ।’
उनले भनिन, ‘तेरो बाध्यतालाई शौख बनाइदिन्छु ।’
अफिसमा सबैजना बंग्ला बोल्थे । भाषा र अफिसको राजनीतिका कारण म तनावमा हुन थालें । बाथरुम गएर रुन थालें भने कार्डको इन र आउट टाइमलाई नोट गरेर भनिन्थ्यो, ‘यो सिटमा छैन ।’
मेरो आत्मविश्वास क्षीण हुन थाल्यो । डिप्रेशनले क्रमशः मलाई गाँज्न थाल्यो । डाक्टरलाई पनि भेटेँ तर समस्या सिद्धिएनन ।
यसैबीच मैले इन्टरनेटमा मेल एस्कर्ट अर्थात पुरुष यौनकर्मी बन्ने बाटो देखें । यस्तो फिल्ममा मात्र देखेको थिएँ । पुरुष यौनकर्मी बन्नका लागि प्रोफाइल बनाइने केही वेबसाइटबारे थाहा पाएँ ।
मैले जुन महिलालाई भेटें त्यसमा विवाहित, सम्बन्धविच्छेद भएका, विधवा र किशोरी पनि समावेश थिए । यी मध्ये धेरैका लागि म मानिस नभई माल थिएँ । जबसम्म उनीहरुको इच्छा पूरा हुँदैनथ्यो सबैले निकै राम्रोसँग कुरा गर्दथे । आफ्ना श्रीमानसँग सम्बन्धविच्छेद गरेर मसँग विवाह गर्नेसम्म भन्थे तर बेडरुममा बिताएको केही समयपछि सबै प्रेम कता हराउँथ्यो कता ।
र धेरैपटक गाली पनि !
एकपटक एक श्रीमान–श्रीमतीले मलाई सँगै बोलाए । श्रीमान सोफामा बसेर रक्सी पिउँदै हामीलाई हेरिरह्यो । म उसकै अगाडि उसकी श्रीमतीसँग बेडमा थिएँ ।
यसैबीच ५० वर्ष नाघेकी एक महिला पनि मेरी क्लाइन्ट बनिन । उनी मेरो जीवनको सबैभन्दा भिन्न अनुभव थियो ।
रातभरी उनले मलाई छोरा–छोरा भनेर कुरा गरिरहिन । उनका छोरा र परिवारले उनलाई वास्ता नगरेको कहानी सुनाइन । उनी परिवारबाट टाढा बस्छिन ।
उनले मलाई भनिन, ‘छोरा, यो धन्धाबाट निस्किऊ, यस्तो ठिक हुँदैन ।’
त्यो रात हामीबीच कुराकानीबाहेक केही भएन । बिहान उनले मलाई छोरा भनेर तोकिएको रकम पनि दिइन, जसरी एक आमाले आफ्नो छोरालाई स्कूल जाने बेलामा दिन्छिन । मलाई साँच्चै नै ती महिलाका लागि दुःख लाग्यो ।
आमालाई रिसमा भनेँ, ‘तपाईंले सोध्नु हुन्थ्यो नि, अचानक यति धेरै पैसा कसरी पठाउन थाल्यौ । आमा म धन्धा गर्छु ! धन्धा ।’
उहाँले भन्नुभयो, ‘चुप लाग, रक्सी पिएर जे पनि बोल्छस तँ ।’
तर यो धन्धामा धेरैपटक अचम्मका मानिसहरु पनि भेटिए । कतिले शरिरमा घाउ बनाइदिन्छन ।
यसको निशान शरिरमा पनि हुन्छन र आत्मामा पनि । र यसको पीडा अन्य यौनकर्मीले मात्र बुझ्छन । समाजले जसरी हेरेपनि ।
यो व्यवसायमा गएकोमा मलाई कुनै अपसोच छैन ।
हामी बाहिर जान्छौं, फिल्म हेर्छौँ । रानी मुखर्जीको ‘लागा चुनरीमे दाग’ फिल्म मलाई निकै मनपर्छ । सायद म त्यो फिल्मको कहानीमा आफैंलाई देख्छु ।
(बिबिसीबाट साभार गरिएको ।)